नेपालगञ्जमा देउवामाथि कार्यकर्ताको अाक्रोशः तपार्इ मरेपछि बल्ला हाम्रो पालो अाउने हो ? – Halkaro
नेपालगञ्जमा देउवामाथि कार्यकर्ताको अाक्रोशः तपार्इ मरेपछि बल्ला हाम्रो पालो अाउने हो ?
काठमाडौँ । प्रदेश ५ र ७ मा आयोजना हुने सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गरेर गृहजिल्लासम्म चुनावी गतिविधिमा संलग्न हुन निस्केका देउवामाथि बाँकेमा कांग्रेस कार्यकर्ताले अाक्रोश पोखेका छन् । पार्टी सभापति देउवा नेपालगन्ज विमानस्थलमा झरेपछि जिल्ला सभापति किरण कोइरालालगायत सानो समूह लिन पुगेको थियो ।
विमानस्थलमा गए पनि कोइराला विशिष्ट कक्षमा देउवालाई भेट्न गएनन् ।’देउवाले धेरै पटक बोलाए पनि कोइरालाले भेट्न इन्कार गरे ।’ प्रतक्ष्यदर्शीले भने, ‘देउवाको अपमान नै गरियो ।’ भन्दै अाजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
त्यस्तै अाजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि यसैलार्इ समाचार बनाएको छ । आधा खुला भएको भुइँतलाको सानो हलमा खचाखच कार्यकर्ता भरिएका थिए कांग्रेस बाँकेको पार्टी कार्यालयमा । सुरक्षाकर्मीलाई भीड मिलाउन हम्मेहम्मे थियो । पार्टी जिल्लासचिव कपिल शर्माले कार्यक्रम सुरु गरे । कार्यकर्तालाई जिज्ञासा राख्न भने । मञ्चमा बसेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला सभापति किरण कोइरालासँग कानमा खुसुक्क भन्दै थिए, ‘केको जिज्ञासा छ र ? ऐले ढिला हुन्छ ? ’ कोइरालाले राख्न दिऊँ भन्ने इशारा गरिन् ।
उनलाई कार्यक्रम सञ्चालक जिल्लासचिव शर्माले जोडबल गरेर बसाउन खोजे पनि कार्यकर्ताले ‘हुटिङ’ नछाडेपछि बसाउन सकेनन् । तर, उनलाई जबर्जस्ती बस्न लगाइयो ।
अर्का कार्यकर्ता सोमबाहदुर थापा जुरुक्क उठेर एक्कासि कुर्लिए ‘सभापतिज्यू कहिलेसम्म हामीले तपाईंहरूको झोला बोकिरहने हो ? के तपाईंहरू मरेपछि मात्रै हाम्रो पालो आउने हो ? ’
← ३७ दिनपछि गौचनको हत्यारा पक्राउ, कहाँ छन् मुख्य योजनाकार ?
तरकारीमा विचौचिलयाः यस्तो छ चेन, किन महंगिँदै छ तरकारी →